Fil d'actualités du 21/08/2018
21/08/2018 - 17:05 : RAHARIVOHATRA CLAUDE: Tsy voaray ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany ho filoham-pirenena, fa tara ny fahatongavany teny amin'ny HCC.
21/08/2018 - 17:00 : DIDIER RATSIRAKA: Izy no kandida farany nandrotsaka ny antontan-taratasy hahafaha-miatrika ny fifidianana amin'ny 7 novambra.
21/08/2018 - 14:20 : HCC AMBOHIDAHY: Tonga manatitra ny doseany i Arlette Ramaroson, kandida ho filoha ihany koa.
21/08/2018 - 13:00 : Orlando Robimanana, atolotry ny antoko Madagasikara Vina sy Fanantenana); Jean Max Rakotomamonjy, Leader Fanilo; Alain Mahavimbina, Gasikara Antsika Rehetra; Haingo Andriakajamalala Rasolofonjoa Avotra ho an'ny Firenena, Armandine Malala Savaron Rasoamalala; Falimampionona Rasolonjatovo Fitambolagnela/IAD no nanatitra dosieny ny tapany maraina teo.
21/08/2018 - 12:00 : FIFIDIANANA : Kandida faha-34 nanatitra taratasy filantsaha-kofidiana ho filoha i Jean Louis Zafivao, atolotry ny antoko Gasy Mifankatia (GASYMI)
21/08/2018 - 11:00 : ORLANDO ROBIMANANA: Nandefa iraka nanatitra ny antontan-tararatasiny filantsaha-kofidiana filoha teny amin'ny HCC Ambohidahy izy androany, ka nitarika ny delegasionina i Bruno Razafindrakoto.
21/08/2018 - 10:15 : HCC AMBOHIDAHY: Tonga manatitra ny dosieny i Haingo Rasolofonjoa olon'ny Arema teo aloha, izay mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko Avotra ho an'ny Firenena.
21/08/2018 - 09:30 : POLITIKA: Hanao fanambarana eny amin'ny Hotely Le Louvre Antaninarenina ny Praiminisitra teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier, izay tsy HVM intsony fa mitarika ny antoko Orimbaton'i Maragasikara anio.
21/08/2018 - 09:00 : FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA: Mifarana anio 21 aogositra amin'ny 5ora hariva ny fandraisana ny dosien'ireo kandida
20/08/2018 - 15:00 : RANDRIAMAMPIONONONA JOSEPH MARTIN NA DADAFARA: Tafapetraka androany ny taratasy firotsahan-kofidiany ho filoham-pirenena.
Archive du 20180226
Tantsaha sy mpiasan’ny AAA – Antsirabe Voadaroka lakrimozenina, 5 naratra
Nanao hetsika ho fitakiana ny fanokafana ny orinasa AAA ny sabotsy lasa teo ireo mpiasa sy mpitantana tao Antsirabe tampon-tanàna, notronin'ireo tantsaha maro avy amin'ny faritra vakinankaratra iny ary ireo solombavambahoaka voafidy tao Antsirabe voalohany sy faharoa.
Depiote Nicolas Halatra ireny nataon’i Andry Rajoelina ireny ka tsy maharitra
Na dia be aza no tokony hamaly an’ireny tenin’i Andry Rajoelina tamin’ny fahitalavitra amin’ireo tompon’andraiki-panjakana toy ny minisitra mpomba ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa dia mahagaga fa ny tena ihany no tsy mahatsindry fo ka hamaly an’ireny fanambarana nataony ireny indray,
Andry Rajoelina Miezaka mafy mampivondrona ny ekipany
Nifampiarahaba sy nifampirary soa noho ny taom-baovao 2018 ny vondrona Mapar sy ireo mpiara-dia azy notarihan’ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina.
Orinasan-dRajoelina Ahiana hanaradia ny AAA Tiko
Hita ho mailo dia mailo ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, raha ny fihetsiny sy ny firesany taorian’ny fiverenany teo amin’ny tontolo politika indray taorian’izay 4 taona nahanginany izay.
Lalàna mifehy ny fifidianana Hodinihin’ny parlemanta manomboka anio
Hanomboka anio ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon’ny antenimieram-pirenena, ka raha ny voafaritry ny lalàna dia tsy hihoatra ny 12 andro izany. Hifantoka betsaka amin’ny fandinihana ny tolo-dalàna momba ny fifidianana ny ny lahadinika, arahin’ny fandaniana izany.
Vao tonga eto Gasikara, dia efa menatra ny tena Hoe eny Ivato aza dia efa rano be mangeniheny. Kotsa sahady ireo mba fitafy sy kiraro vaovao. Ary ahiana mihitsy aza ho boboka sy lao.
Seraseran’ny Prezidansa Nodimandry i Tsilavina Ralaindimby
Nodimandry omaly alahady 25 febroary maraina teo amin’ny faha-70 taonany ny talen’ny fifandraisana eo anivon’ny fiadidiana ny repoblikan’i Madagasikara, Tsilavina Ralaindimby.
Seranam-piaramanidina Ivato Dibo-drano tamin’ny sabotsy
Efa mba ela ihany no niainana teto Madagasikara fa tsy mbola fahita ity zava-nitranga teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny sabotsy hariva teo.
Vidim-panafody Miaka-bidy ihany koa
Taorian’ny fiakaran’ny JIRAMA dia nahitana fiakarana ihany koa ny vidin’ny fanafody eny amin’ny toeram-pivarotana eto Madagasikara. Araka izany dia mikaikaika ny maro indrindra fa ireo manana ny marary mainka moa ireo miditra hopitaly.
Fiantohana Tsy mbola laharam-pahamehana ho an’ny Malagasy
Maivana ny fiantohana eto Madagasikara satria betsaka no tsy mahalala ny tombontsoa azo avy amin’ny fiantohana.
Mponin’ny faritra iva Hampianarina mihary
Tsy afa-misitraka ny zo ekonomikany, amin’ny ankapobeny, ireo mponin’ny faritra iva, raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Cefor, Jean Ambinintsoarivelo, na ny ivontoerana iray misehatra amin’ny fanabeazamboho ny fanofanana ara-pihariana tetsy amin’ny Pave Antaninarenina ny zoma teo.
Voalaza ho namosavy ankizy roa Vehivavy iray matin’ny fitsaram-bahoaka
Vehivavy iray antsoina hoe Fielina no voalaza fa matin’ny fitsaram-bahoaka tany Ambitsika Mananara Avaratra ny faran’ny herinandro lasa teo.
Baolina kitra tompondakan’Analamanga Vita avokoa ireo lalao miverina rehetra
Tonga dia notontosaina omaly alahady 25 febroary avokoa ireo lalao miverin’ny andro voalohan’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny baolina kitra
Basket-Ball « Coupe du Président Zone Ouest » Nahery ny ASB Itasy nandresy ny Cnaps Itasy 108-91
Nahery ny ekipan’ny ASB Itasy tamin’ny lalao famaranan’ny fifanintsanana “Coupe du Président Zone Ouest” notontosaina ny sabotsy 24 febroary teo tany Arivonimamo nanoloana ny ekipan’ny Cnaps Itasy.
Rugby tetsy Malacam Voatanan’ny XV Family ady sahala ny Irc
Mitohy hatrany ny fifaninanana rugby etsy amin’ny kianja Malacam Antanimena tarihan’ny ligin’Analamanga na dia teo aza ilay fanatanterahana fifidianana hoe hanoloana an’i Andry La Pie mpitarika azy.
Iniana ampahoriana !
Mijaly tanteraka ny Malagasy eo anatrehan’ny fahasahiranana mandifotr’olona zakaina amin’izao. Na vary hohanina aza tsy voavidy intsony noho ny fidangany.
Gare routière MAKI-Andohatapenaka Niboridana ilay vehivavy tsy navela nivarotra
Tsy azo hivarotana mihitsy etsy amin’ny tobim-piantsonana vaovao Andohatapenaka.
Mpivarotra etsy amin’ny Fasan’ny Karana Very fanahy mbola velona, nisy nivaro-pananana
Very fanahy mbola velona tanteraka ny ankamaroan’ireo mpivarotra etsy amin’ny Fasan’ny Karana amin’izao fotoana.
Fifamoivoizana an-tanàn-dehibe Tsy mety milamina
Tsy mety milamina ary efa tsy nilamina hatramin’izay ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Ny resaka fiantsonan’ireo fiara mpitati-bahoaka no tena tiana asian-dresaka.
“Marché O Soldes” andiany voalohany Hotanterahina ny 23,24 ary ny 25 martsa izao
Hampiantrano hetsika ara-barotra goavana isika eto an-drenivohitra ny 23,24 ary 25 martsa ho avy izao. “Marché O Soldes” no anarana nampitondraina izany karakarain’ny B-COM &C. Eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka hanatontosana azy io ahitana mpandray anjara hatrany amin’ny 200 isa.
Labiera CASTEL Nivoaka ny tavoahangy 65 Cl
Navoaka tamin’ny endrika vaovao ny zava-pisotro Castel Beer. Raha tsiahivina kely ny tantara dia tao anatin’ny 65 taona izay, dia anisan’ireo vokatra fanta-daza indrindra aty amin’ny faritr’i Afrika Miteny Frantsay ny Castel Beer.
Trano iray nianjera tety Andravoahangy omaly alahady. Lehilahy iray no naratra mafy vokatr’izany. Efa nidina ifotony teny an-toerana ny mpamonjy voina. Mateti-piseho mihitsy ny loza amin’izao fotoam-pahavaratra izao, ka ilaina hatrany ny mitandrina.
Inter RD Congo
Naparitaky ny mpitandro ny filaminana tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso sy basy misy bala mamono ny hetsika am-pilaminan’ny vondron’ireo laika tao Kinshasha